Date My Pet » 7 Tips Fa ny Romantic fifandraisana
Ny anjely ny fitiavana no nandondòna tao ny varavarana? Ianao no iray amin'ireo olona tsara vintana, nefa ankehitriny tsy maintsy mitandrina ny lelafo. Ahoana no ireo mpivady mandrakizay izany? Ianao zo hijery ny tari-dalana, ary miezaka mianatra zavatra avy amin'izy ireo. Ireto ny sasany ny zava-miafina sy ny soso-kevitra sasany mba hanampy anao hihazona fifandraisana droa mahomby:
1. Matokia ny tenanao
Tsy ny momba anao rehetra, fa be dia be ny olana fifandraisana mahita ny loharanom-baovao any amin'ny mpiara-miasa roa’ hatoky tena. Tokoa, alohan'ny tia olona, manana ho amin'ny fanekena tanteraka ny tenanao, ho tia ary matoky ny tenanao. Na dia nanana ny mpivady dia tsy afaka miafina ao ambadiky ny olona iray indray. Ve izy / izy mifaritra? Aza manontany tena ny antony / izy no momba anao. Fa tsy, antoka tsara ianao lalao. Izy / izy koa dia manana ny fahafahana ho amin'ny olona toa anao. Nefa tsy natoky tena loatra, dia tokony ny tenanao noho ny zavatra izay no, ary ny zavatra hitany ny mpiara-miasa ao anatinareo.
2. Doze ny fialonana
Ny hoe miara-mandeha dia midika hoe mpivady ao anatin 'ilay lalana. Matoky ny tsirairay ary tena ilaina ny mifandray mivantana amin'ny hatoky tena. Ny mpiara-miasa mikasa ny hanana takariva avy amin'ny namana tao amin'ny bara? Hanome azy / azy toerana ny sasany, ary tsy hamely azy amin'ny fanontaniana toy ny: Taiza ianao? Teo ankizivavy / ry zalahy? Ny fialonana dia mandreraka, ary izany tokoa no fomba tsara indrindra mba handefa olona izy.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny ho an'ny mpivady fa ianao dia olona iray izay hanampy anao amin'ny fotoana ilàna. Ekeo ny fampaherezana, ary toy izany koa ny toe-tsaina hanaraka ny mpiara-miasa, rehefa mila izany. Na iza na iza dia amin'ny fifandraisana mahomby dia milaza aminao fa ireo mpiara-miombon'antoka-pitiavana, voalohany indrindra, manao ny marina sy manohana namana amin'izy samy izy, ary rehefa afaka izany ihany, tia.
4. Gaga ny hafa
Isika rehetra dia mahatsapa ny vokatry ny fahazarana, harafesina izany no mahatonga anao sy ny sweetie ho farafara ovy. Isika rehetra dia manana ny fahazarana kely izay mameno ny fiainantsika, fa raha te-hitandrina ny fifandraisanareo ny lelafo ny, no tsara mba tsy ho variana amin'ny isan'andro tsy misy ahodiny ho ao amin'ny fiainanao. Mivoaha miara-, hizara traikefa vaovao. Tsarovy fa ny fitiavana dia toy ny zazakely, dia mila sakafo.
Open fifandraisana no surefire fomba mahery vaika fifandraisana. Manampy anao hahafantatra kokoa ny tsirairay, hahatakatra ny zavatra tsapanao momba ny olana samihafa, ka jereo ny hafa ny fomba fijerin'ny. Aza manorina fasika lapa! Mifandray amin'ny tsirairay sy ny fanorenana ny fifandraisanareo ho cemented amin'ny simenitra.
6. Maka fotoana ho an'ny tenanao
Ny fifandraisana Mila fotoana fanoloran-tena, fa izany no tsy midika hoe isaky ny namany tsy afaka ny hanana na inona na inona afa-tsy. Mbola manana ny namana, ny fialam-boly sy ny asa! Hanokana fotoana ho azy ireo sy ho anao irery. Ora vitsivitsy afa-tsy ny mpiara-miasa dia hahatonga anao malahelo sy hankasitraka bebe kokoa ny hafa.
7. Ho marin-toetra amin'ny samy izy
Ny fahadiovam-po dia salama saina fototry ny misy karazana fifandraisana. Aoka ho marin-toetra amin'ny tsirairay miresaka ny fihetseham-ponao, na tsy am-bava am-bava. Izany dia hahatonga ny fifandraisana ihany no matanjaka kokoa.